झापामा जिउँदो खसी जोखेर किनबेचको सुरुवात - Sajhamanch
२०७८, आश्विन ११ गते साँझको ०६:४१:५६ बजे Monday 27th September 2021
झापामा जिउँदो खसी जोखेर किनबेचको सुरुवात
बिर्तामोड । सहारा नेपाल साकोस अन्तरगत एग्री बिजनेश युनिटले जिउँसो खसी जोखेर मासु ब्यवसायीलाई बेच्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ ।
खसीको ढाड छामेर वा उचालेर अनुमानित तौलका भरमा किनबेच गर्दा दुवै पक्षलाई घाटा भएको आशंका हुन्छ । वर्तमानको यही चलनलाई परिमार्जन गर्दै ब्यवसायीकै आगाडि जिउँसो खसी डिजिटल तराजुमा जोखेर किनबेच गर्न थालिएको एग्री बिजनेश युनिटका डा. कमलेश्वर भाटले साझामञ्चलाई बताए ।
सहाराले इलामबाट ल्याएको खसी ५६० रुपैयाँ प्रतिकेजीका दरले ब्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको जनाउँदै डा. भाटले यो विधिबाट ब्यवसाय गर्दा मासु ब्यवसायीलाई घाटा नहुने जानकारी दिए । सहाराले भ्यालु चेन बिजनेशको अवधारणलाई अगाडि सारेकाले बाख्रापालक किसानलाई महत्व दिएर यस्तो अभियानको थालनी गरिएको डा. भाटको भनाई छ ।
सहारा नेपालको कार्यक्षेत्र भित्र बाख्रापालन गर्दै आएका आफ्ना व्यवसायी सदस्यहरुबाट खसी संकलन गरी संस्थाले नयाँ प्रयोग थालेको हो । आफ्ना सदस्यको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहाराले सहयोग गरेको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रकुमार गिरीले बताएका छन् ।
पहिलो चरणमा इलाम र उदयपुरका सदस्यबाट खरिद गरिएको खसी झापादेखि काठमाडौंसम्म पुर्याएर जिउँदै जोखेर बिक्री गर्ने कार्यप्रारम्भ भएको उनले जनाए । यो क्रम कम्तीमा दशैंसम्म जारी रहने जनाइएको छ ।
September 9, 2021 12:23 pm | अर्थतन्त्र,मुख्य समाचार,सहकारी